Antsoy Us: + 86-532-86198899
Enviromental Derusting Fitaovana
Koronosy Machine / Core Shooter Machine
QSC90 Stone Texturing Voatifitra vary main'ny rivotra Machines
QBT Tubing Pumping Sub Voatifitra vary main'ny rivotra Machines
QH69 H Tara Ary H-Fizarana Steel Profile Voatifitra Blastin ...
Q48 (Q58) Pendant Chain / Chain hoist hanitsaka karazana (s ...
Resin Sand Processing-dalana,
Clay Sand Processing-dalana,
FD Series Compressed rivotra fanadiovana ambonin'ny vovoka d ...
PPW andian-dahatsoratra lava kitapo fitepon'ny fony rivotra kitapo-mikoriana vovoka indray ...
FD Series Compressed rivotra fanadiovana ambonin'ny vovoka hetra
Compressed Air fanadiovana ambonin'ny FD Deduster Series dia mitohy ny fanadiovana tanteraka mandeha ho azy amin'ny Compressed rivotra. Ny malambolambo filtration tsindry Differential no miantoka soa aman-tsara ny fiasan'ny precipitator. Raha ampitahaina amin'ny FS rivotra namely indray-hanadio, ny fampiasam-bola lany dia ambany. Ny fanadiovana fitepon'ny fony dia mandeha ho azy ny herinaratra-maso entona. Fanadiovana ny fotoana sy ny elanelam-potoana io dia azo ahitsy Construction: Ny sivana trano na ny fanaka vy welded nanamafy. Ny varavarana nasiana tombo-kase miantoka fa vovoka-entana ...
Supply Fahaizana: 10000 Sets per year
Compressed Air fanadiovana ambonin'ny FD Deduster Series dia mitohy ny fanadiovana tanteraka mandeha ho azy amin'ny Compressed rivotra. Ny malambolambo filtration tsindry Differential no miantoka soa aman-tsara ny fiasan'ny precipitator. Raha ampitahaina amin'ny FS rivotra namely indray-hanadio, ny fampiasam-bola lany dia ambany. Ny fanadiovana fitepon'ny fony dia mandeha ho azy ny herinaratra-maso entona. Fanadiovana ny fotoana sy ny elanelam-potoana io dia azo ahitsy
Construction: Ny sivana trano na ny fanaka vy welded nanamafy. Ny varavarana nasiana tombo-kase miantoka fa ny vovoka mandatsa-dranomaso-entana dia afaka miditra ao amin'ny efi-trano rivotra madio. Ny fivorian'ny sivana iray ahitana ny sivana kitapo sy ny fanohanana tensioned pad. Ny vovoka dia azo mora foana kitapo mavesatra entana, ary namaha ny entana hiala eo anoloan'ny amin'ny alalan'ny Fanidiana tahony.
Sivana Area (m 2)
Sakan'ny Filter (MG)
Rivotra (m 3/ h)
Previous: PPW andian-dahatsoratra lava kitapo rivotra kitapo fitepon'ny fony back-mikoriana vovoka hetra
Next: MC system vovoka hetra
Bag lamba famàohana
Dot Peen fanamarihana Machine
Fandavahana Vovoka hetra
Dry Ice vary main'ny rivotra Machine
Vovoka hetra Cartridge Filter
Vovoka hetra Cyclone
Vovoka Collector Filter Bag
Vovoka Collector Fa vary main'ny rivotra Machine
Vovoka Collector Fa simenitra
Vovoka Collector Fa Laser sokitra Machine
Vovoka hetra System
Vovoka hanivana hetra
Floor Vovoka hetra
Herimpo vary main'ny rivotra Fitaovana
Industrial Vovoka Filter
Jet Pulse Vovoka hetra
Mechanical Rapping Vovoka hetra
Mini Vovoka hetra
Portable Vovoka Collector
Pulse Back Blow lamba famàohana
Pulse Vovoka hetra
Vovoka etỳ ambonin'ny hetra
Vovoka nampiasaina Filter
Wet vary main'ny rivotra Machine
Kodia Fipoahana Machine
PPW andian-dahatsoratra lava kitapo rivotra kitapo fitepon'ny fony indray-mikoriana ...
XLCM Long kitapo ambany tsindry hanin-kotrana vovoka hetra
HR Filter cartridge vovoka hetra
Enviromental Derusting Fitaovana Cyclone vovoka ...
Fume sehatra nanapaka rafitra fanadiovana
Mila ny fanampiantsika? Alefaso ny Inquiries
Qingdao Changjia milina Co., Ltd.
Phone: + 86-532-86198899